कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय २१ पुग्यो – BANKE POST
भदौ १४,नेपालगंज-बाँकेका ८ सहित आज १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जसमध्ये नबिल बैंकका १ र टेलिकमका २ कर्मचारी पनि रहेका छन् । नेपालगञ्ज वडा नं. १० का १९ महिने शिशुमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बर्दियाका २, बठाना मोहतारीका १, बनेपा काभ्रेका १ र नेपालगञ्जका ८ गरी १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ९० जनामा गरिएको परीक्षणमा १२ जनामा संक्रमण देखिएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ । बाँकेमा आज थप २४ जना कोरोना संक्रमित निको भई डिष्चार्ज भएका छन् । यो संगै बाँकेमा कोरोना संक्रमण निको भई घर फर्कनेको संख्या ७ सय २७ पुगेको छ । आज सशस्त्र गुल्म आइसोलेसन सेन्टरबाट १६ जना, होटल सिटी प्यालेस आइसोलेसनबाट ३ जना, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल आइसोलेसनबाट २ जना, अतिथि होटल आइसोलेसन कोहलपुरबाट २ जना र होटल इन्द्रेणीबाट १ जना निको भई डिष्चार्ज भएको फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताउनुभयो । आज डिष्चार्ज भएका अधिकांश सशस्त्र प्रहरीका हुन् । अर्कोतर्पm, देशैभर आज कोरोनाका १२ सय २१ संक्रमित थपिएका छन् । यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या ३८ हजार ५ सय ६१ पुगेको छ । संक्रमित मध्ये २० हजार ८ सय २२ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशैभर ४ महिला र १० पुरुष गरी १४ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार योसहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय २१ पुगेको छ ।